Indawo ethule- Ukubuka Okuhle - I-Airbnb
Indawo ethule- Ukubuka Okuhle
Hemlock, New York, i-United States
Indawo esepulazini ibungazwe ngu-Larry
Indawo enhle yokubuka izilwane zasendle. Ifulethi eliqediwe ngaphezulu kwesitoreji sepulazi lesihlahla sikaKhisimusi. Indawo yokungena ehlukene enezitebhisi. Ukuhlelwa kwezwe okunokubukwa okuhle kakhulu, amachibi, izindawo ezinamahlathi, nokubukwa okuhle kwezilwane zasendle. Ukuhlala kwakho kufaka umgodi womlilo ozowusebenzisa kanye ne-gazebo embozwe ngetafula lepikiniki. Umpheme owedlulele phezu kwechibi uyatholakala ukuze ubhukude futhi udobe. Ukudoba okunelayisensi kugcinwa-akukho layisensi edingekayo. Amachibi amaningi namaxhaphozi ongawajabulela. Imizila yokuhamba ngezinyawo iyatholakala. I-birding enhle kakhulu.
Indlovukazi engu-1 nombhede wabantu ababili ababili. Indawo yokungena ehlukene enezitebhisi ezilodwa. Izinto zikagesi zifaka istovetop, isiqandisi/isiqandisi, ihhavini, imicrowave. Itafula Legumbi Lokudlela kanye nesiqhingi sasekhishini elinezihlalo ezi-2. Idekhi ebheke iFinger Lakes kanye neLake Ontario/Rochester emaphandleni.
Izinto ezikhangayo- vakashela i-Hemlock ne-Canadice Lakes ehlanzekile, engathuthukisiwe, i-SUNY Geneseo, i-Finger Lakes Wine Trail, ukuhamba ngebhayisikili okuhle kakhulu emigwaqweni ebukekayo nesogwini lwechibi, imibukiso nemikhosi, izinkundla zegalofu zendawo, i-Letchworth State Park, iminyuziyamu yase-Rochester, izikhungo zemvelo, izinkundla zemidlalo yaseshashalazini kanye nezitolo. . Ukubuka kweqabunga lokuwa okumangalisayo. Eduze nezindawo eziningi ukuze ubuke amaqabunga.
Ababungazi bayatholakala njengoba kudingeka noma njengoba beceliwe. Ukungena kwangasese esakhiweni esihlukile kuvumela ubumfihlo obukhulu. Indawo yokupaka ehlukile kanye ne-driveway phambi kwesikhungo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Hemlock namaphethelo